ယနေ့လူငယ်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှု သိမှတ်ဖွယ်ရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » ယနေ့လူငယ်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှု သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ယနေ့လူငယ်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှု သိမှတ်ဖွယ်ရာ
Posted by အရင့်ရောင် on Jun 27, 2012 in Ideas & Plans | 17 comments
ယဉ်ကျေးမှုသည် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာ၍ လည်းကောင်း ၊ စကားဟြေဆိုရာ၍ လည်းကောင်း ၊ နေထိုင်စားသောက်ရာ၍ လည်းကောင်း ၊ လှုပ်ရှားသွားလာရာ၍ လည်းကောင်း ၊
အရေးကြီးသော အမူအရာတစ်ရပ်ဖြစ်ပေသည်။ အဓိကအားဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုသည် ကိုယ်အမူရာ ယဉ်ကျေးမှု နှုတ်အမူအရာ ယဉ်ကျေးမှု ဟူ၍ ရှိပေသည်။ထိုယဉ်ကျေးမှုသည် စာရိတ္တကောင်းခြင်းနှင့်မတူပေ။
အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းသော်လည်း ကိုယ်နှင့်နှုတ်၏ ယဉ်ကျေးမှုမရှိသည်ကို တွေ့ရတက်ပေသည်။ ထို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့သည် အကျိုးရှိသလောက် မရရှိနိုင်ချေ။ ယဉ်ကျေးမှုသည် အတက်ပညာနှင့်လည်း မဆိုင်ပေ။ ထို့အတူ မွေးရာပါ အမူအရာလည်း မဟုတ်ချေ။သင်ကြား ၊ ပြသ ၊ ဆိုဆုံးမမှုဖြင့် ပြုပြင်ရသော အလေ့အကျင့် အမူအရာ ဖြစ်သည်။
အကျင့်စာရိတ္တလည်း-ကောင်း ၊ အတက်ပညာလည်း-တက် ၊ ယဉ်ကျေးမှုလည်းရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည် အလွန်အဖိုးတန်သော လူတော်လူကောင်း အမျိုးကောင်း သား/သ္မီး ဖြစ်၏။ ယဉ်ကျေးမှုကို တန်ဖိုးပေး ၀ယ်၍မရသော်လည်း ၊ ယဉ်ကျေးမှုဖြင့် အရာရာကို ရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုသည် ရှေးအစဉ်အလာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြခံ၍ ဖြစ်တည်လာခဲ့သည့် ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ အမူအရာဖြစ်သည်။ စိတ်ကောင်းရှိခြင်း ၊ အကြံအစည်ကောင်းခြင်းတို့သည် ယဉ်ကျေးမှု၏ မူလ အခြေခံဖြစ်သည်။ သနားညှာတာခြင်း ၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားထားရှိခြင်း ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်မမွေးခြင်း ၊ မေတ္တာရှေ့ထား၍ ချေချေငံငံဟြေဆိုဆက်ဆံခြင်းတို့သည် မွန်မြတ်သော ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်၏။
ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံသည် လူမျိုးတိုင်း ၊ ဘာသာတိုင်း၌ရှိသော အမူအကျင့်ဖြစ်၏။ သို့သော….. တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ၊ တစ်ဘာသာနှင် တစ်ဘာသာမတူညီချေ။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အတုယူသင့်သည်များရှိသကဲ့သို့ ရှောင်ရှားသင့်သည်များလည်း ရှိပေသည်။ အထူးသဖြင့် အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အရှေ့တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုကား လုံးလုံးလျားလျား ကွဲပြားခြားနားလျှက်ရှိပေသည်။
အရှေ့တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုသည် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ၏ အဆုံးအမကို အခြေခံသော ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်သည်။ အရှေ့တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု (အဓိက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု) ကို စာအုပ်စာပေများ ဖတ်ရှုခဲ့ခြင်းကြောင့် အခုလို နည်းနည်းလေးမျှသိရှိခဲ့ရပါသည်။
မည်သောဟူရှင့် ” ဟူ၍
အရှင် မန်လည်ဆရာတော်ကမဃဒေ၀လင်္ကာစာအုပ်တွင် ရေးဖွဲ့၍ ဆုံးမ အသိပေးခဲ့ပါသည်။ မိဘ များသည် ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀ကပင် မိမိတို့၏ သား/သ္မီးများကို လိမ္မာရေးခြားရှိသော ယဉ်းကျေးမှုရှိသော အမျိုးကောင်း သား/သ္မီ များဖြစ်လာစေရန် သင်ကြားပြသ ဆိုဆုံးမ ကြရသည်။ သို့မှသာ အားကိုးအားထားပြုရသည့်သား ၊ အရိပ်ခို၍ မိဘ၏ရင်ကို အေးမြစေသည့် သမီး ဖြစ်လာကြပေမည်။
“ ငယ်ငယ်ကသား ၊ ကြီးလာတော့အား ”
“ ငယ်ငယ်ကသ္မီး ၊ ကြီးလာတော့ထီး ” ဟူ၍ ဆိုရိုးစကားထားရှိပေ၏။
“ ငယ်ငယ်ကသား ၊ ကြီးလာတော့ကျား ”
“ ငယ်ငယ်ကသ္မီး ၊ ကြီးလာတော့မီး ” ဟူသည်နှင့်အညီ
မိမိ၏ “သား”သည် အားမကိုးရပဲ “ ကျား ”ကဲ့သို့ ကြောက်စရာ သား ဖြစ်လာမည်။
“သ္မီး” သည်လည်း ထီးကဲ့သို့ အရိပ်ခိုစရာမရရှာပဲ ၊
“မီး” ကဲ့သို့ပူလောင်စေသောသမီး ဖြစ်လာကြပေမည်။
မတက်ငြားဟု ” ဟူ၍ လမ်းညွှန်သြ၀ါဒ ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း မိဘများက သား/သ္မီးများအား ယဉ်ကျေးမှုကို သင်ကြားပေးရန် အထူးလိုအပ်နေပေသည်။
ဤအချက် (၁၀)ချက်ကို သေချာစွာ ဖတ်မှတ်စေချင်ပါတယ်။
၁။ မိခင်ဖခင်၊ ကျေးဇူးရှင် ၊ မြဲပင် နိစ္စချစ်ပါကြ။
၂။ နှမထိုထို ၊ ညီအစ်ကို ၊ ကြည်ညိုရွှင်ပြ ၊ ကြင်နာကြ။
၃။ မယားနှင့်လင် ၊ စိတ်ပျော်ရွှင် ၊ အစဉ်ထာဝရ ၊ ကြည်သာကြ။
၄။ မိတ်ဆွေရင်းချာ ၊ ပေါင်းသောအခါ ၊သစ္စာဓမ္မ ၊ စောင့်ထိန်းကြ။
၅။ ဣနြေ္ဒသိက္ခာ ၊ စောင့်စည်းပါ ၊ လိုအင်ဆန္ဒ ၊ နည်းပါးကြ။
၆။ အားလုံးသတ္တ၀ါ ၊ ကိုယ်ချင်းစာ ၊ မေတ္တာရှေ့ထား ၊ သနားကြ။
၇။ အတက်ပညာ ၊ သင်ကြားခါ ၊ ကျင့်စာရိတ္တ ၊ ကောင်းပါကြ။
၈။ အများကောင်းရာ ၊ သယ်ပိုးခါ ၊ မြဲစွာလုံ့လ ၊ ပြုပါကြ။
၉။ ပြည့်သူ့ဥပဒေ ၊ အထွေထွေ ၊ ရိုသေစွာပ လိုက်နာကြ။
၁၀။ လူမျိုးတွက်တာ ၊ ကြုံကြိုက်လာ၊ ညီညာဖျဖျ ၊ စွန့်စားကြ။
ဟူ၍ ဖတ်ရှုမှတ်သားထားသမျှလေးကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်…….
မည်သူ့ သား/သ္မီး ဟု
ပြည်သူ့နီတိယဉ်ကျေးမင စာအုပ်မှ မှတ်သား ရေးမှတ် ဖတ်အပ်သည့် စာတွေမို့လို့
နေတက် ၊ ထိုင်တက် ၊ ဟြေတက် ဆိုတက် ၊ လုပ်တက်ကိုင်တက်ရှိကြပြီး
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော လူရည်ချွန် ၊ လူရည်မွန်များဖြစ်လာကာ
ဘာသာတရား၏ အဆု့းအမများနှင့်ယဉ်ပါးပြီး ဖြစ်နေကြသဖြင့် ဘာသာတရာကို မှန်ကန်လေးနက်စွာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တက်သော ၊ လိုက်နာကျင့်သုံးတက်သော လူတော်လူကောင်းများဖြစ်လာကြမည်မှာ ဧကန်ဖြစ်ပါသည်။ လူငယ် လူရွယ်များ ဘာသာတရား ၊ လူမှုရေး ၊ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်ရှေးရှုလျှက် လူတော်လူကောင်းများ ဖြစ်လာကြပါစေသတည်း ။
ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတ ရပါတယ်ရှင်
အခုလို တင်ပြပေးတာ တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သိနှင့်ပြီးသား ရွာသူ/သာတွေ အတွက်တော့ ဆားမပါတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်လိုပဲပေါ့နော်
ညီလေးတွေ ညီမလေး တွေတော့ ဒါတွေကို နဲနဲလေး လောက်ပဲ သိမယ်
အဲ စာတွေက အများကြီး …
ဖတ်တော့ ဘူး မအားတေးလို့ ..
ဟိဟိ အဲလိုယဉ်ကျေးတာ …
ကိုအရင့်ရောင်ရေ ……… အခုလို ပညာပေးစာပေစာသားလေးတွေကို မျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ ….. ယဉ်ကျေးတယ် မယဉ်ကျေးဘူးဆိုတာ တစ်ခါတစ်ရံ မိဘအုပ်ထိန်းသူနဲ့သက်ဆိုင်သလို ပတ်ဝန်ကျင်နဲ့လည်း သက်ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် တစ်ချို့ကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ရိုင်းစိုင်းနေတဲ့သူတွေရှိသလို ပတ်ဝန်း ကျင်ကြောင့်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားသူတွေလည်းရှိပါတယ် ……..
မှတ်ထားပြီးလိုက်နာသင့်တဲ့အရာတွေကို ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးနော် ကိုအရင့်ရေ……….. မှတ်သားသွားပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကိုရင့် စာတွေကိုဖတ်ပီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှက်တောင်ရှက်တယ်
တော်တော်လိုသေးတယ်လို့လည်းထင်တယ်လေ (ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမနာတမ်းဝေဖန်ကြည့်တာနော်)
“ ငယ်ငယ်ကသ္မီး ၊ ကြီးလာတော့မီး ”
ဖတ်ပြီးမှတ်သွားပါတယ် ဗျို့ ။
အမှန်ပြောရင် အကုန်နီးပါးမလိုက်နာခဲ့ ဘူးဗျို့ 
ခုမှ လိုက်နာရင်ကောင်းမလားလို့ 
နောက်လဲ ကလေးတွေအတွက် ရေးပေးပါအုံး…
မေ့သွားလို့ …… တစ်ဆယ်ယူသွားလိုက်အုံးမယ်နော်
အင်း .. ဒီတခါတော့ လွတ်လွတ်ကင်းကင်းတင်လို့ ..၀င်မန့်ပါဦးမယ် …(ဂေဇက်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး သူ့ချစ်သူဆီရေးတဲ့ ကဗျာမဟုတ်တာကြောင့်လည်း ပါတယ် )
ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ စာရိတ္တနဲ့ … ဘာမှ မဆိုင်တာကိုတော့ ထောက်ခံတယ် .. ။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမျိုးကလေ … စိတ်ရင်းထဲမှာ ရှိမှ .. လုပ်ဆောင်နိုင်တာမျိုး … ဟန်ဆောင်ပြီး လုပ်နေလျှင် ခဏတာပဲ ဖုံးဖိထားနိုင်တဲ့ အပြုမူမျိုးလို့ ထင်ပါတယ် … ။
ရှေးစွန်းစွဲ..ကွန်ဆာဗေးးးးးတစ်တွေရေးတဲ့.. စာတွေ..အတွေးအခေါ်တွေကို.. မိုဒမ်နှိုက်စ်လုပ်သင့်ပြီလို့ထင်မိတယ်..
အဲဒါတွေကို.. ဒီအတိုင်းကူးချ..လိုက်နာလက်ခံနေမဲ့အစား.. တခုချင်းစီကို.. ဒီခေတ်နဲ့ညှိ..ဆွေးနွေးကြည့်ပါလား..
ဆိုတာမှာ.. ယူအက်စ်ဆို.. ကိုယ့်ကလေးကို.. ကျောင်းပို့ချိန်..ကျောင်းမပို့ရင်. စာသင်ရမဲ့အရွယ်..စာပေးမသင်ရသ်… အစိုးရက..မိဘကို.. ဆိုရှယ်ရုံးပို့ပြီး…ပညာပေးမယ်..
သားသမီးနဲ့..မိဘ.. ရန်တိုက်ပေးတာမပါ..။ ဘေးလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက.. အစိုးရကတဆင့်..ဥပဒေထုတ်ပြီး.. သတ်မှတ်လုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့..
ကျန်တာတွေ.. ချဲ့တွေးးစဉ်းစား… ဆွေးနွေးကြည့်ကြစေလိုတာပါ..
သဂျီးရဲ့ ..သူတို့ နိုင်ငံမှာ .. အစိုးရကိုက .. လူတွေအတွက် အလုပ်ကိုင်၊အခွင့်လမ်း ခံစားခွင့်တွေ .. လုံလောက်အောင်ပေးထားတာ .. ဒီတော့ သူတို့ကလေးတွေ ကျောင်းမပို့ပဲ ..အလုပ်ထွက်လုပ်ခိုင်းတာမျိုး … မရှိလောက်ဘူး .. ဒီမှာက ကလေးလည်း စကားပြောတတ်လျှင် တောင်းစားလို့ ရတယ် … စာနည်းနည်း တက်လျှင် … ဈေးရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ ……. စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး .. ထအော်ဖို့တောင် …. လိပ်ပြာမလုံဖြစ်မိပါတယ်
အကို အရင့်ရောင် ရေအခုလိုမှတ်သားစရာကလေတေ တင်ပေးတဲ့အတွက်